टमाटर देखि खाल कसरी हटाउने। सफाई र सिफारिसहरू लागि विधिहरू
खाद्य र पेय पदार्थ, पकाउने सुझाव
एकदम अक्सर, विभिन्न व्यञ्जन पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री आवश्यक टमाटर को तयारी मा। तिनीहरूले भिटामिन र अन्य पोषक धेरै समावेश, तर आफूलाई द्वारा तिनीहरूले एक सुखद स्वाद र सुगन्ध छ।
सामान्यतया, तयारीको समयमा तपाईं टमाटर देखि छाला सफा गर्न आवश्यक छ। अन्यथा, उच्च तापमान को प्रभाव अन्तर्गत, त्यो मुनाहरू र जो एकदम पकवान को उपस्थिति र स्वाद बिगार्छ गर्न सक्छन्, धेरै कठोर छ। त्यहाँ कसरी टमाटर देखि खाल हटाउन धेरै सिद्ध विधिहरू छन्। हामीलाई विस्तार तिनीहरूलाई प्रत्येक विचार गरौं।
यो सबै तपाईं तयार के पकवान मा निर्भर गर्दछ। सूप वा टमाटर सूप, टमाटर, ओवन मा सुखा वा पैन मा तला र गर्न सक्छन्, मिश्रित तरकारी, एक कैम्प भन्दा पकाएको?
विधि एक: उम्लिरहेको पानी प्रयोग
धेरै अनुभवी पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री तातो पानी संग टमाटर देखि छाला कसरी सफा गर्न थाह छ। यो विधि सबैभन्दा लोकप्रिय र व्यापक छ। हामीलाई यो थप विचार मा बास गरौं।
तपाईं एक ठूलो कचौरा वा पानी उम्लिरहेको को पैन र टमाटर आफूलाई आवश्यक हुनेछ। पूर्व-निशान चक्कु को शीर्ष मा प्रत्येक तरकारी crisscross। त्यसपछि एक पट मा उत्पादन ठाँउ र तातो पानी खन्याउन। यो खातामा टमाटर को परिपक्वता लिन आवश्यक छ। तिनीहरूले धेरै पाकेको हो भने, त्यसपछि तिनीहरूले छाला नै फिर्ता गर्न थाले गर्न आधा मिनेट आवश्यक हुनेछ। उत्पादन पर्याप्त परिपक्व छैन भने, त्यसपछि कम्तिमा साठी सेकेन्डको लागि पानी मा भिजेको। यसलाई अन्यथा तिनीहरू तयार गर्न सुरु हुनेछ, तरकारी ज्यादा गर्न छैन यो मामला मा महत्वपूर्ण छ।
चिसो पानी मा टमाटर र स्थान हटाउनुहोस्। अब पातलो चक्कु को मद्दत संग छान्नुहोस् छाला को अन्त र यसलाई पुल। तपाईं छाला को टमाटर नै अलग छ कसरी देख्न हुनेछ।
विधि दुई: blanching
पक्कै पनि हामी सबै चिसो Blanch तरकारी गर्न अघि कसरी थाहा छ। यसरी यो टमाटर सफा गर्न धेरै सजिलो छ भन्ने थाहा छ? त्यसैले, कसरी blanching प्रयोग गरेर टमाटर देखि खाल विभाजन गर्न?
तरकारी र उबाल पानी धुनुपर्छ। पानी उम्लिरहेको बीस सेकेन्ड उत्तेजित गर्दछ मा टमाटर डिप। तपाईं छाला टूट छ हेर्न भएपछि, तुरुन्तै पानी उत्पादन लागि पुग्न। चिसो तरल मा टमाटर राख्न र बिस्तारै छील।
विधि तीन: माइक्रोवेव ओवन को प्रयोग
आजकल, लगभग हरेक घर एक माइक्रोवेव ओवन रूपमा यस्तो प्रविधी छ। यो मात्र होइन तपाईं न्यानो वा खाना defrost मदत गर्न सक्छ, तर पनि खुली टमाटर शुद्ध। कसरी टमाटर देखि खाल हटाउन को माइक्रोवेव मा?
एक सपाट तल संग पकवान मा टमाटर राख्नु र आफ्नो भन्दा माथि मा धेरै कटौती बनाउन। एक माइक्रोवेव ओवन मा तरकारी राख्न र 30 सेकेन्ड को लागि ताप मोड बारी। छाला माइक्रोवेव उजागर छ यो समयमा अप गर्मी र मज्जा देखि नै फिर्ता गर्न थाल्छन्। तपाईं आवश्यक बिस्तारै मात्र यसलाई हटाउन हुनेछ।
केही Housewives कसरी टमाटर देखि खाल हटाउन को बरु जटिल बाटो चयन गर्नुहोस्। तिनीहरू केवल तरकारी मा crusades कटौती गर्न र शरीरका देखि छाला tearing, तिनीहरूलाई सफा गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यो विधि सजिलो छ, तर यो अवस्थित एक सही छ।
विधि पाँच: पकाना
तपाईं टमाटर पकाउन भने, तिनीहरूलाई राम्ररी Bake, तिनीहरूले पूर्व-साफ गर्न सक्नुहुन्छ। यो टमाटर नुन र मनपर्ने मसला थप्न सिफारिस गरिएको छ। एक पाक पकवान मा तरकारी राख्न र ओवन मा ठाँउ हो। गर्मी उपचार पछि, छाला wrinkled र नै छोड्ने सुरु हुन्छ। बोक्रा तरकारी थियो सकिन्छ तुरुन्तै उपयोग गर्नु भन्दा पहिले। यो विधि मा उत्पादन र रस को सबै भन्दा स्वाद, साथै सबै उपयोगी गुणहरू बचत हुनेछ।
टमाटर, यो सफा गर्न राम्रो छ पछि, आगोमा पकाएको। यस मामला मा, तिनीहरूलाई कालो पाप्रो ढाकिएको छील र सजिलै स्वतन्त्र उत्प्रेरित गर्छ। त्यसैगरि पकाएको तरकारी, यो यसको मूल रूप मा फाइल राम्रो छ, र खाने अघि छाला देखि सफा छ।
कसरी टमाटर देखि खाल हटाउन, तपाईं शायद पहिले नै थाह थियो। तर कहिले काँही नुस्खा तरकारी बीउ को सफाई को लागि भनिएको छ। तीन भागमा - यो हेरफेर पूरा गर्ने अधिकार विस्तार गर्ने क्रममा, यो आधा र प्रत्येक आधा खुली टमाटर कटौती गर्न आवश्यक छ।
त्यसपछि, धारिलो चक्कु उपयोग, मज्जा देखि बीउ हटाउन र बिस्तारै टमाटर कुल्ला।
धेरै छाला रहित टमाटर खान nicer (marinated वा stewed, ताजा वा उसिनेर)। बोक्रा भएको टमाटर गरिबी मानव शरीर द्वारा अवशोषित र वस्तुतः indigestible छ। त्यो पनि यो कम appetizing बनाउने, भाँडा को उपस्थिति भताभुंग पार्छ। धेरै व्यञ्जनहरु मा यसलाई हटाउन सिफारिस किन छ।
बीउ पनि शरीर लागि विशेष लाभ ले। त्यो क्रम यो उत्पादन को सबै भन्दा राम्रो प्राप्त गर्न, तपाईं राम्ररी टमाटर पूर्ण, केवल मज्जा छोडेर सफा गर्नुपर्छ किन छ। खुशी साथ खाना पकाउन र तपाईं यस तरकारी को शुद्धीकरण लागि उपयुक्त विधिहरू चयन गर्नेछ। खानपान!
Risotto पकाउन कसरी केही सरल रहस्य, चावल सँगै छडी छैन
मासु कलेजो, मुख्य रहस्य कसरी तलना गर्न
कसरी राम्रो मासु तलना गर्न
राउन्ड टेबल "जैतून तेल - स्वास्थ्य र सौन्दर्य"
पानी कसरी हर्कुलेसक्लस्टर पकाउने porridge सिक्ने
नुनीन खीरे कसरी बनाउने मा केही सुझावहरू
Antiviral चिकित्सा "Tamiflu": प्रयोगको लागि निर्देशन
आधुनिक रूसी आपराधिक व्यवस्था सिद्धान्त मा अपराध को प्रकार
Rectification के हो? प्रक्रिया विवरण र उद्योग मा आवेदन
"Turskidki.ru": समीक्षा र यात्री लागि सुझावहरू
पीएपी के हो? पीएपी परीक्षण: ट्रान्सक्रिप्ट र प्रक्रिया को सुविधाहरू
Bombardier Q400 - क्यानाडा मा व्यापार
ड्रम संक्षिप्त: डिकोड, एक संक्षिप्त इतिहास
CSS रंग गुणहरू। रंग कोड
किन बोसो गर्दा रोक धूम्रपान प्राप्त: सम्भव कारण र समस्या को समाप्त
सेवा Antimalware सेवा कार्यान्वयनयोग्य: यो के हो र कसरी एक अत्यधिक लोड गर्दा सिस्टम स्रोतहरू यसलाई बन्द गर्न?